Maitiro ekutonga kwehutano
Kaviri-sided adhesive tepi
Laminated foil insulation Yakatarisana
Nzira yekubvisa Duct Tape Adhesive
na admin pa 21-11-25
Duct tape residue inogona kudzikiswa nekushandiswa kwakakodzera uye kubviswa nenzira dzakasiyana siyana. Duct tape chishandiso chinoshamisa chekugadzirisa matambudziko akasiyana, kubva pane-pa-basa kugadzirisa kune mapurojekiti epamba. Duct tape kuita kwakasiyana-siyana uye kusimba kunobva kune rabha-based adhesive. Izvo zvakasara izvi adhesiv ...
Chii chinonzi Foil Tape?
Foil tepi inowanzogadzirwa kubva kualuminium, asi inogona zvakare kuve negirazi kana kugadzirwa kubva mutobvu, mhangura, tin plating, uye simbi. Foil tepi ine mabhenefiti akawanda sezvo chinhu ichi chinogona kunamatira kune akawanda akasiyana marudzi enzvimbo, uye nekudaro ine akawanda akasiyana maapplication mumaindasitiri nemapurojekiti. Alu...
Chii chinonzi Double Sided Tape?
Yakagadzirwa nekuisa yakatetepa yekunamira layer kune yega yega inotakura substrate zvinhu, kaviri-mativi tepi, inozivikanwawo seyakapetwa-yakavharwa tepi kana kaviri-inotarisana tepi, inoshandiswa zvakanyanya neakakura maindasitiri ekushandisa senge bonding, kubata. , kuisa, kubatanidza, uye kurongedza. Zviri pachena, ...
Musiyano uripo pakati pealuminium foil tepi uye fiberglass aluminium foil tepi
Aluminium foil tepi ndiyo huru mbishi uye yekubatsira zvinhu zvefiriji uye firiza kugadzira zvidyarwa. Kushandisa high-quality pressure-sensitive adhesive, good adhesion, strong adhesion, anti-aging and other effects. Iyo thermal insulation performance inovandudzwa zvakanyanya. Aluminium foil tepi yakashandiswa...
Aluminium fiberglass jira tepi
Aluminium fiberglass jira tepi tepi yakasimba uye inochinjika ine simba rakanyanya kusimba, kubaya uye kuramba kubvarura. Nekunamira kwekumanikidza, inonamira zvakanaka kune dzakasiyana siyana uye pamusoro pezvisina kujairika kana zvisina kuenzana substrates. Iyi tepi ine chiedza uye inopenya kupisa. Icho makemikari kuramba ...
Kushandiswa kwealuminium foil tepi
Aluminium foil tepi, uchishandisa high quality pressure sensitive adhesive, yakanaka viscosity, yakasimba adhesion, anti kuchembera nezvimwe zvinokonzeresa. Kuita kwekudzivirira kunovandudzwa zvakanyanya, izvo zvinotsanangurwa ndezve (0.05mm-0.08mm) hupamhi hwakasiyana uye hurefu. Aluminium foil tepi inoshandiswa kubatanidza kubatana kwe ...
Chii chinonzi Aluminium Foil Tape, Chaizvo?
Aluminium foil yakatanga kuwanika muna 1888, uye kugadzirwa kwezvokutengeserana muUnited States kwakatanga muna 1913. Yakakosha nokuda kweunhu hwayo hwekudzivirira uye kuonekwa kunokwezva mumidziyo uye kurongedza, yakashandiswa zvakanyanya muHondo Yenyika II kuchengetedza mapakeji, magetsi emagetsi, uye kuvhara. Mushure mehondo...
Kaviri mativi tepi, furo kaviri-mativi tepi, nzira yekubvisa sei mavara emarudzi ese ematepi ane mativi maviri?
na admin pa 20-07-23
Muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, tinowanzo shandisa tepi, uye munzvimbo dzakasiyana-siyana, rudzi rwetepi inoshandiswa yakasiyanawo. Kunyange zvazvo tepi iri nyore kwazvo kushandisa, pane dambudziko rinowanzoitika, kureva kuti, zvakaoma zvikuru kubvisa mitsara yakasara ne tepi mushure mekushandisa. Vanhu vazhinji vachasarudza kushandisa tauro rakanyorova...
Kuvaka nzira yealuminium foil isina mvura tepi simbi chimiro padenga.
(1) Zvinoenderana negevha uye hupamhi hwekubatana kwemhando yesimbi ndiro kana chikamu chemubatanidzwa, uye zvinoenderana nezvinodiwa zveinjiniya dhizaini, saizi yekutsanangurwa inosarudzwa. (2) Pukuta majoini endiro yesimbi yakachena. (3) Tanga kubva kune imwe mugumo wesimbi ndiro, zvishoma nezvishoma vhura kaviri-sided adhesive tepi al...
Maitiro ekuwana 300 ℃ yakakwirira tembiricha kuramba yealuminium tepi
Aluminium tepi ndiyo huru mbishi zvinhu uye zvekubatsira zvefiriji uye firiji fekitori, uye zvakare inodiwa mbishi yezvinhu zvinopisa zvekupisa zvinhu Dhipatimendi reDistribution. Inoshandiswa zvakanyanya mumidziyo yemagetsi, mota, mabhiriji, kuvaka uye mamwe maindasitiri. Asi sezvo ...
Ndeapi mashandisirwo ealuminium tepi
Kana zvasvika kune tepi yealuminium, ndinotenda iwe unofanirwa kujairana nayo. Muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, tinogona kazhinji kuona zvigadzirwa zvemagetsi emagetsi. Izvi zvinotevera sumo pfupi yekushandiswa kwearuminiyamu tepi? Chekutanga pane zvese, tepi yealuminium inogadzirwa nepamusoro-mhando yekumanikidza-inonzwa adhesi ...
Kugadzirwa uye maitiro e general kraft bepa tepi
Iyo kraft bepa tepi yatinowanzo shandisa inogadzirwa nekraft bepa seyakadzika zvinhu, yakaputirwa nemvura-inonyungudika adhesive uye yakaomeswa. Ikozvino yakagadzirika kuita kraft bepa tepi yatinoziva nayo. Aya matepi epa kraft ane adhesion yakasimba, uye nekuda kwekushandiswa kwekraft bepa, iyo tensile stre...
© Copyright - 2010-2019 : Kodzero Dzose Dzakachengetedzwa. Mazano - Hot Products - Sitemap - AMP Mobile
Fireproof Aluminium Foil Tape, Aluminium Foil Tape Dispenser Dhizaini, Foil Insulation Tape, Aluminium Foil Tape YemaDucts, Aluminium Foil Insulation Tape, Plain Aluminium Foil Tape,